Ahoana no ahatongavan'ny diabeta? -Ny Diabeta Diabeta-Fitsaboana Sino
Ahoana no ahatongavan'ny diabeta?
Fotoana: 2019-08-23 Hits: 378
Ekena amin'ny ankapobeny fa ny ankamaroan'ny diabeta karazana 2 dia vokatry ny fomba fiaina tsy salama. Ny tena manokana dia mihinana tsara kokoa ny olona ary tsy manao fanatanjahan-tena firy. Ny fihetsika toy izany dia mety miteraka olana: ny fihinanana kaloria be loatra dia tsy mety may fa miangona ao anaty vatana, navadika ho glucose, rehefa mihabetsaka ny glucose ao amin'ny ra, dia esorin'ny nosy olombelona ho azy ny insuline bebe kokoa amin'ny fampiasana glucose.
Saingy, rehefa be loatra ilay nosy kely dia tsy fantatry ny olona, ​​mihinana bebe kokoa aza izy ireo, tsy dia mihinana fanatanjahan-tena intsony, raha toa ka misy ny zavatra toa izao dia tototra ilay nosy ary tsy manafina insuline intsony rehefa mihabe ny siramamy ao amin'ny ra.
Mitranga ny diabeta rehefa miakatra amin'ny teboka iray ny haavon'ny glucose amin'ny ra.
Naseho tamin'ny hevitra ara-pitsaboana, ny diabeta dia aretina mitaiza, aretin-kozatra metabolisma glucose vokatry ny tsy fisian'ny insuline na fanoherana insuline, miaraka amin'ny tavy, proteinina, rano ary aretim-piteran'ny electrolyte miavaka amin'ny hyperglycemia mitaiza.
Miaraka amin'ny diabeta, ny olona dia mety hiseho soritr'aretina toy ny "polys telo ary iray kely" ----- mihinana bebe kokoa, misotro bebe kokoa ny urine sy ny fihenan-danja. Saingy olona maro no tsy manana an'ireto soritr'aretina ireto. Aza mieritreritra àry fa ny "manana fahazotoan-komana" dia "toe-batana tsara".
Fanazavana fanampiny: masontsivana diagnostika momba ny diabeta
Ny haavon'ny glucose ao amin'ny Plasma (mmol / L)
Soritr'aretina mahazatra an'ny diabeta (polydipsia, polyuria, fihinanana tafahoatra, fihenan-danja) miampy kisendrasendra
fitsapana glucose amin'ny ra
Fifadian-kanina glucose amin'ny rà
Glucose mandritra ny 2 ora aorian'ny ra
Tsy misy soritr'aretina diabeta, mila averina
Fanamarihana: ny siramamy amin'ny fifadian-kanina amin'ny rà dia manondro 8 ora farafahakeliny tsy misy sakafo; ny glucose an-dra tampoka dia midika fa tsy mandinika ny ora fisakafoanana farany ka tsy azo ampiasaina hamaritana ny glucose tsy mahomby amin'ny fifadian-kanina na ny fandeferana glucose manimba.
Pejy mialoha: Rehefa mifady hanina ny haavon'ny glucose amin'ny ra dia ambany noho ny mahazatra ...
Pejy manaraka: Fa maninona ianao no diabeta?